नेपाल ट्रस्टको कार्यालय भाडामा दिँदा ५ अर्ब बढी अनियमितता, कस–कसले खाए देशको यत्रो रकम ? « Light Nepal
नेपाल ट्रस्टको कार्यालय भाडामा दिँदा ५ अर्ब बढी अनियमितता, कस–कसले खाए देशको यत्रो रकम ?
Published On : 17 April, 2018 7:21 am
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँंदा ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ। ट्रस्टका सचिवले गरेको निर्णयलाई एक सहसचिवले लत्याउँदै ५ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ। सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, ट्रस्टले १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी ५ अर्ब घोटाला गरेको हो।
आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन समितिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा ट्रस्टले १ अर्ब ५२ करोड ४० लाख ५२ हजारमा सम्झौता गरी ५ अर्ब घोटाला गरेको हो । , यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।